Umphathi Wezinhlelo zeSistimu (iBaltimore, Maryland) - I-Ellicott Dredges
Umphathi Wenethiwekhi Baltimore, Maryland
Ukubuka konke Umsebenzi
Umphathi Wenethiwekhi unesibopho sokuhlinzeka ukwesekwa kwezobuchwepheshe kwansuku zonke kwabasebenzi kanye nekhompyutha ehlukahlukene, iseva nokuphathwa kwenethiwekhi. Lo muntu unesibopho sokufakwa nokugcinwa kwayo yonke i-Hardware ne-software, ukubheka isimo senethiwekhi ukuqinisekisa ukuthi wonke amadivayisi asebenza kahle, ukuphathwa kohlelo lwe-imeyili lweNkampani nokunikeza usizo oluhlobene ne-IT kuwo wonke amaklayenti.
Umphathi Wenethiwekhi kufanele abe nobuchwepheshe bobuchwepheshe, kanye nolwazi lwezinqubo nezindlela zokusekela iWindows (endaweni yebhizinisi), ukuphepha kwenethiwekhi, ukuxhumana kwe-LAN / WAN, kanye nokuphathwa kweseva esebenza endaweni etholakala kakhulu. Kufanele ngibe nekhono lokubamba iqhaza ngempumelelo emaqenjini wephrojekthi ukusiza ukuqhuba ukuqeda ngempumelelo, umugqa wesikhathi wemihlangano, ikhwalithi, kanye nezinjongo zesabelomali. Kufanele ukwazi ukuxhumana ngempumelelo nabasebenzi boMnyango we-IT, kanye nabasebenzisi bokugcina kanye nabahlinzeki beqembu lesithathu. Kufanele ibe nekhono lokwenza uhlelo lobuchwepheshe lokubuyisa futhi ixazulule inkinga yamadivayisi amaningi nokulungiswa kwendawo eningi yendawo.
Imithwalo yemfanelo kanye Nemisebenzi
Khonza njengephuzu lokuqala lokuxhumana okusekela ubuchwepheshe nezehlakalo kanye nezicelo, kufaka phakathi kepha kungagcini ku:
Izicelo Zedeski Losizo Lomsebenzisi wokugcina kanye nokulandela umkhondo wesigameko ngohlelo lwe-Spiceworks ithikithi
Ukuxhaswa kwe-Hardware ne-software, ukuthuthukiswa kanye nokufakwa esikhundleni kwe-laptop, ideskithophu, iphrinta ne-server system
Ukuxazulula inkinga ngezigameko zenethiwekhi kanye / noma ezihlobene neseva.
Ukwenziwa kwezicelo ezivunyelwe zenethiwekhi nezeseva.
Setha ama-akhawunti amasha womsebenzisi, izimvume namaphasiwedi
Phatha i-imeyili, anti-ogaxekile nokuvikelwa kwegciwane
Nikeza ukuqeqeshwa kanye nokuholwa kubo bonke abasebenzisi
Phatha futhi ubheke ukuqapha kwe-Veeam
Unolwazi ekuphatheni ama-akhawunti we-Office365, amabhokisi wemeyili, kanye nokuqinisekiswa kwezinto eziningi
Yenza imisebenzi eqhubekayo yokulungiswa kwezinhlelo nokuphatha njengokufaka uhlelo, ukuqapha isipele, ukuqapha ukusebenza kohlelo, ukuqapha ukuphepha, njll.
Yenza imisebenzi yokusebenza ehlobene nezinhlelo zokwenziwa kwengqalasizinda yezobuchwepheshe, kufaka phakathi kepha kungagcini lapho:
Phatha futhi uphathe ukwakhiwa kwesisekelo, isikhungo sedatha, kanye namaseva asuselwa efwini
Sebenzisa i-laptop nezindawo zokusebenza zedeskithophu kubasebenzi abasebenzisa isoftware yokucabanga nezindlela ezinhle kakhulu zokuzijwayeza
Faka futhi ulungiselele amadivaysi ezokuxhumana ngenethiwekhi (ukushintshwa kwenethiwekhi, ama-routers, izindawo zokufinyelela ngaphandle kwe-wireless, njll.)
Vuselela ukuphepha kwenethiwekhi - gcina izimvume zokufinyelela, sebenzisa izinqubomgomo, ulungise ubungozi, njll.
Hlela uphinde usebenzise ukufezekiswa kwamaphrojekthi kwe-IT kwakwamanje
Yenza imisebenzi ehambisana nezinqubo zokuphepha ezisezingeni eliphakeme nezinqubo ezisezingeni elifanele, imithetho / amazinga.
Idiploma yesikole samabanga aphezulu noma efanayo
(2) + iminyaka yolwazi lwangaphambilini olusebenza endaweni efanayo yomlawuli wenethiwekhi.
Qondisa isipiliyoni sezandla ngokuxazulula inkinga nokusekelwa kwamakhompyutha, amaseva, namadivayisi wenethiwekhi asebenza endaweni enamasayithi amaningi ngokususelwa kubuchwepheshe be-Microsoft.
Ukusebenza ngolwazi ngokuphepha kwanamuhla, ukubamba amasistimu, nokusongela izindlela ezivikela kakhulu, amathuluzi nobuchwepheshe obusetshenziselwa ukuvikela indawo yekhomputha yebhizinisi.
Ukusebenza kolwazi ngemiqondo ye-LAN / WAN / Wi-Fi kanye nemiqondo yokuxazulula inkinga.
Ukusebenza kolwazi lokusekelwa okuvamile nemisebenzi yokuphatha uhlelo okuhlobene nokusekela i-imeyili endaweni ye-Microsoft Office365 / Outlook esekwe yemiyalezo.
Umsebenzi ubandakanya izidingo ezikhethekile zomzimba njengokuphakamisa amakhilogremu angama-50 noma ngaphezulu, ukukhuphuka ngezitebhisi, njll. Ukuphakamisa amakhompyutha, amaphrinta nezinye izinto ezihlobene nekhompyutha.
Owenza amandla okuba namakhono okuxhumana aqinile namlomo
Uyakwazi ukubeka phambili, uhlangabezane nemikhawulo futhi usebenze ngaphansi kwengcindezi
Uyakwazi ukusebenzisana kahle namaqembu kanye nabantu kuwo wonke amazinga
Izimfanelo Ezifunwayo noma Ezithandwayo
Iziqu zeBachelor zivela ekolishi eliqinisekisiwe noma eyunivesithi kwi-Computer Information Technology, Computer Science, Management Information Systems, noma enye inkambu ehlobene nobuchwepheshe ukufaka umsebenzi we-course ezilimini zomshini wekhompyutha, nezinhlelo zokusebenza nobuchwepheshe bokuxhumana kwedatha bokuphindaphindeka amakhompyutha.
Isitifiketi se-Net +
Izitifiketi zeMicrosoft zamanje kuDeskithophu, iServer, i-Exchange kanye / noma i-Office365
Ukuqinisekiswa kwamanje kweCisco kweCCNA
Fakani Qalisa futhi nencwadi Cover